Nhau - Mufananidzo weboka revamwe vevashandi
General maneja Wu Yunfu akaita hurukuro yekugamuchira pamusangano. Akatambira nekugamuchira vaenzi vese nekuvatenda nerutsigiro rwavo rwemazuva mazhinji mukusimudzira Lujury, uye akaunza mamiriro azvino ekuvandudza uye kuronga kweramangwana kweLujury nenzira yakazara uye yakajeka.
General maneja Wu Yunfu akaita hurukuro
Wu Yunfu akati: Chinangwa chekubata chechitatu chevatengesi mhando foramu ndeyekuburitsa mazano edu, teerera kune ako mazano, kuhwina rutsigiro rwako, kuisa pamberi zvatinoda, kudzamisa manzwiro emativi ese maviri kuti akunde-kuhwina mamiriro.
Vaenzi vari mumusangano
Wu Yunfu akataura kuti kubvira pakagadzwa, Lujury agara achitenda kuti "mhando ndiyo hwaro hwebhizimusi" kwemakore gumi nemasere, uye akaumba hushamwari hwakadzama nevaanoshanda navo. Nekuyedza pamwe nerutsigiro rwevanopa, zvakazivikanwa ne mazhinji mazhinji emagetsi emagetsi emagetsi, akadai seAIMA, LIMA, LUYUAN uye SLANE. Parizvino, Lujury akaisa pamberi sirogani yeku "kugadzira ramangwana nemoyo" .Tiri kuda kuramba tichishanda pamwe chete nevatinoshanda navo kutsvaga ramangwana. Nguva nyowani nerwendo rutsva, isu tichagara tichigadzira kubwinya kutsva.
Mutevedzeri mukuru maneja Zhang Juqin akapinda musangano uyu
Panyaya yekuti ungaziva sei zvinowirirana zvinobatsira uye kuhwina-kuhwina mushandirapamwe, Wu Yunfu akaronga kuti vatengesi vanofanirwa kuyerwa kubva mumaonero akawanda.
Chekutanga, nguva yekuendesa: kusvika panguva yezvinhu zvakakosha ndiyo muenzaniso webhizimusi kutendeseka. Kiyi yekukunda-kuhwina mushandira kuvimbika.
Chechipiri, mhando: Simbisa kudzora kwemhando yeakare-fekitori chigadzirwa uye kudzikisa kuwanda kwekudzoka
Yetatu, sevhisi: Natsiridza sevhisi mhando inoenderana nezvakanaka
Chechina, kuvandudzwa kwechigadzirwa chitsva: Sayenzi uye hunyanzvi hwekuvandudza isimba rekufambisa rekuvandudza bhizinesi, uye R&D inoda kubatsirana pamwe, uye hunyanzvi hunosimudzira kuoneka kwemamiriro ekuhwina-kuhwina.
Unyanzvi director Peng Hao anopa hurukuro
Peng Hao akatsanangura nezvehunhu hwehunyanzvi kubva kumatatu anotevera, anoti sevhisi, hunyanzvi uye mhando.
Kutanga, sevhisi. Ingangoita yega yega kambani inokoshesa sevhisi se "hupenyu" hwekupona kwebhizinesi. Chero kambani inofuratira sevhisi uye ikatadza kugutsa zvinodiwa nevatengi inoshurikidzwa kuderera.
Chechipiri, hunyanzvi. Zuva idzva rinoita zuva idzva. Kuti uve nechokwadi chekuenderera mberi nekusimudzira, mabhizinesi anofanirwa kugara achizvivandudza.
Chechitatu, mhando. Zvekuvandudza kwakanaka, mabhizinesi anofanirwa kusimbisa kukosha kwehunhu hwechigadzirwa, huri hupenyu hwemakambani. Pasina kuvimba nevatengi muhunhu hwechigadzirwa, hupenyu hwemakambani hunopfupiswa.
Wu Yuqun, Gurukota Rezvezvinhu Kudzora vakaita chirevo.
Musangano uyu wakagadzira chikuva chakanaka chekutaurirana kwakadzama pakati peLujury nevatengesi, uye chakazosvika pachinangwa chinotarisirwa chekuvaka kubvumirana nekubatanidzwa kwakadzika. Mushure memusangano uyu, mativi ese akataura kuti vachatora mukana uno kuwedzera kusimbisa kutaurirana, kusimudzira pfungwa yekudyidzana, uye kushanda pamwechete kuti vabudirire mumamiriro ekukunda mune ramangwana.